Mpanankarena an-tapitrisany toko faha-3347 - 3348 - XperimentalHamid
Lehilahy mpirotsaka an-tapitrisany toko faha-3347 - 3348
Jolay 25, 2021 by Hisam Ullah
Vakio Toko 3347 - 3348 amin'ny tantara Ilay vady aman-tapitrisany by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
Lisitry ny toko
Misoratra anarana raha havaozina bebe kokoa
Ampidiro ny adiresy mailakao
Ny fanjakan'i Walter Chen avy amin'ny Cataclysmic Front amin'izao fotoana izao dia tena araka ny noeritreretin'i Charlie, nampijaliana tsy manam-paharoa.
Nihevitra izy tany am-boalohany fa ny tafika dia nanindry sy nanao fahirano nefa tsy niady, tena hitondra tsindry ara-tsaina lehibe ho an'i Hamid sy ny olony, ary tsy ho ela akory dia ho lasa tsy milamina, na kilemaina mihitsy ny tafika anatiny ao Hamid.
Fa ny tsy nampoiziny dia ny andro vitsivitsy lasa izay ary na dia ny alika iray aza dia tsy tafavoaka ny sisin'i Hamid.
Miady amin'ity karazana fahirano ity, ny tena matahotra dia ny sitrapon'ny fahavalo.
Raha vao tsy matahotra ny ankilany. Tena fanjifana tsy voafetra izany, mandra-pahatapitry ny bala i Hamid, na raha tsy afaka manohana ny ankilany mandra-pahatongan'izany.
Ary amin'izao andro izao. Nampihoron-koditra ny fatiantoka ara-bola nomeny.
Nanantona azy ny solontenany ary nitory azy tamim-pitaintainana hoe: “Komandy, ireo lehilahy 15,000 30 aminay, ny karamany sy ny fandaniany isan'andro dia 40-XNUMX tapitrisa dolara farafahakeliny. Tsy haharitra ela ny volantsika. ”
Ireo komandin'ny ady efatra an'ny Cataclysmic Front, samy nandray ny mekanin'ny fitantanam-bola tsy miankina, izay mitovy amin'ny tsirairay amin'ireo olona efatra ireo dia nanokatra sampana tsy miankina ho an'ny lafiny ara-bola hahazoana fahaleovan-tena, nefa koa mba hahazoana antoka ny tombom-barotra, raha misy ny tsy fahampiana , ao anatiny ihany no azo hamahana azy.
Walter nandre ity angona ity, ny endrik'ilay olona iray manontolo dia mafy noho ny ray maty.
Nihidy vazana izy ary niteny hoe: “Azo antoka fa tsy afaka mitohy toy izao, ampitao ny baikoko, manomboka anio, raha mbola tsy misy ny ady dia hihena antsasaky ny karaman'ny tsirairay!”
Rehefa henon'ny mpiraki-draharaha izany dia hoy izy tamin-tahotra: “komandà, be dia be ny olona mitaraina tato ho ato, raha esorinao indray ny antsasaky ny karamany dia matahotra aho sao hanao fihetsiketsehana marobe!”
Walter dia nanontany tamim-pahasosahana hoe: “Mijanona mandritra ny tontolo andro ireo olona ireo ary tsy manao na inona na inona, tsy mila miady, tsy mila miatrika risika ary mahazo karama araka ny maha-izy azy. Inona no tsy itarainan'izy ireo? ”
Nilaza tamim-pahalalahana ilay mpitsara hoe: "Betsaka ny fihetseham-po ratsy tato anatin'ny roa andro, etsy andaniny, tena tsy afa-po amin'ny sakafo ankehitriny ny olona, ​​etsy andaniny, io no olan'ny fipetrahana."
"Omaly izy ireo dia nandefa solontena vitsivitsy mihitsy aza mba ho tonga hitaraina amiko matetika, ary tian'izy ireo hahita anao hamaha ny olana aho."
Hoy i Walter tamin'ny tarehy mainty: "Azavao mazava tsara aho tsirairay, hoe inona marina no tsy nahafa-po azy ireo."
Saingy hoy ny mpitantana: "Avy eo hiresaka momba azy ireo tsirairay aho, voalohany indrindra, ny olan'ny sakafo, ankehitriny afa-tsy ireo manamboninahitra antonony sy antitra. Ny hafa rehetra dia manana fari-piainana mitovy amin'ny an'ny miaramila ao an-toerana. "
“Na ny mpamatsy aza dia tsy mitovy, ny sakafon-tsakafo any an-toerana dia tsy dia mifanentana amin'ny fahazaran'ny miaramila ……”
"Ny miaramilanay dia mijery tsara ny fahasalamana ara-batana, noho izany ny fahazarana mihinana mahazatra dia ny Amerikana Andrefana kokoa, mihinana hen'omby, legioma, ronono, ary na dia ny dibera sy gilasy isan'andro aza."
Hoy ny mpitsara ary nanohy hoe: "Mikasika ny olan'ny trano itoerany, ny tena zava-dehibe dia tsy tena afa-po amin'ny tranolay diabe izao ny olona."
“Ireo tranolay dia miara-mivory daholo na ny tafiky ny governemanta na aiza na aiza, ny ankamaroan'izy ireo dia efa nipetraka tao anaty tahiry efa ela, ary ny fivoahana dia tranga mahazatra. Fotoanan'ny orana izao, ka mando be ny tranolay, ary ratsy loatra ny fahatsapana fiainana; ”
"Ankoatr'izay, ny olan'ny famatsiana herinaratra dia tsy azo antoka mihitsy ankehitriny, ary ny setra mpamokatra herinaratra vitsivitsy misy fotsiny dia tsy afaka mifanaraka amin'ny fampiasan'ny miaramila maherin'ny 30,000 avy amin'ny andaniny roa."
"Ka ny herinaratra mihodina ihany no azontsika ampiasaina ankehitriny, ary amin'ny antsalany, ny miaramila tsirairay dia afaka mampiasa herinaratra tsy mihoatra ny efatra ora isan'andro."
"Ka samy mangataka fanoloana mitambatra amin'ny trano birao azo ovaina ny tsirairay avy izao ary hiantoka ny famatsian-jiro 24 ora."
Nanozona tamim-pahatezerana i Walter hoe: “Ireto baards ireto! Eto ve izy ireo hiady na hanao fialan-tsasatra? ”
Nilaza ho tsy afa-nanoatra ilay mpampanoa lalàna, “komandà, na dia eto aza izy ireo hiady dia tokony ho fantatrao izany. Tsy tian'izy ireo ny miady amin'ny ady mafy! ”
Raha nilaza izany izy dia nanampy hoe: “Ireo miaramila ifotony ao amin'ny fikambananay no mpikarama an'ady madio indrindra.”
“Miofana sy miady amin'ny ainy izy ireo mba hahazoana vola bebe kokoa hankafizany ny fiainana, raha tsy izany. Iza araka ny eritreritrao no ho vonona hanao rahona be loatra mba lany sy hanao an'io karazana asa io? ”
Walter dia tsy nanana na inona na inona holazaina vetivety. Fantany tsara ny zava-misy ankehitriny an'ny Cataclysmic Front.
Na dia marina aza fa ny Front Cataclysmic Front dia manana komandin'ny mpiady efatra ary manamboninahitra mpiady an'arivony maro an'isa, ny manamboninahitra sy miaramila an'aliny an'arivony dia nanatevin-daharana ny Cataclysmic Front saika manokana hahazoana tombony.
Ho an'ireo mpikarama an'ady ireo dia tsy misy ny tsy fivadihana amin'ny Cataclysmic Front horesahina, mihevitra fotsiny ny olona fa tsara ny vola miditra, ny refy ary ny lazan'ny fikambanana, ka safidio ny hivarotra ny ainy hahazoana tombony bebe kokoa.
Noho izany, ity vondron'olona ity dia tsy hiaritra ny fahafaham-baraka ary handroso mialoha ho amin'ny hoavin'ny Cataclysmic Front.
Ny zavatra karakarain'izy ireo dia ny tenany ihany.
Amin'izao fotoana izao, nanampy ny mpiara-miasa aminy: "Ankoatry ny sombin-trano, raha ny marina, azo takarina ihany koa, mieritreritra an'izany ianao. Tsy fantatray hoe haharitra hafiriana io fahirano io, telo na dimy andro, na folo andro sy tapany. ”
"Tokony ho afaka hanaiky isika, hihidy ny nifin'izy ireo ao anaty lay mba ho velona, ​​na dia tsy voavaha aza ny olan'ny famatsiana herinaratra, fa raha hitohy mandritra ny roa na telo volana na ho lava kokoa aza ity andro ity. Avy eo ny olona rehetra dia azo antoka fa tsy vonona ny hiaina an-day mandritra ny volana maromaro …… ”
Raha niresaka an'io ny mpisolovava dia nampahatsiahy hoe: "komandà, ho avy tsy ho ela ny fahavaratra any Syria, rehefa fito sy telo-polo heny na XNUMX degre aza ny maripana amin'ny andro rehetra, tsy afaka manohitra mihitsy ny olona mipetraka amin'ny lay ……”
Ny tenin'ilay mpitsara dia nahatonga an'i Walter hahatsapa ho voatsindry mafy.
Ny fahasarotana amin'ny famahana ny olan'ny sakafo dia tsy dia lehibe loatra, afaka mividy sakafo any Israel izy, na steak izany na legioma sy ronono, i Israel dia mety ho famatsiana azo antoka, resaka fandaniana tapitrisa tapitrisa dolara isan'andro fotsiny io.
Na izany aza, ny trano finday modular dia tena tsy vahaolana tsara.
Trano birao fanaovana hetsika maoderina, ary ny tranokala misy karazan-trano misy ny hetsika na dia mitovy toetra aza izy ireo, saingy tsy zavatra iray, tsy ny fizotran'ny fananganana ihany no be pitsiny kokoa, manohana endrika bebe kokoa, ary ny vidin'ny famokarana dia fitomboan'ny geometrika.
Raha olona 15,000 no tianao hipetraka amin'ity karazana trano ity, ary famatsiana herinaratra milamina dia tokony ho dolara am-polony tapitrisa farafahakeliny ny vidiny.
Raha nieritreritra an'izany i Walter dia tsy afa-nanoatra ka tsy afaka nilaza afa-tsy tamin'ny sakaizany hoe: "Miverena dia lazao izy ireo mba hanam-paharetana, aorian'ny 5 aprily, angamba ny Komandà Tampony dia ho avy any Syria manokana hamaha ireo olana ireo, raha izany, mila mitazona mandritra ny herinandro iray na mihoatra farafaharatsiny! ”
Niala tsiny tamin'ny fampiasan'i Walter ny anaran'i Joseph izy, karazana fanolorana vonjimaika ny fangatahan'ireo andian-jatovo, saingy voadona tao am-pony momba izany izy.
Ho azy dia tsy tiany ho voavahan'i Josefa io raharaha io amin'ny farany, satria midika izany fa tena nahomby tanteraka izy tany Syria.
Noho izany dia mbola nanantena tao am-pony izy fa afaka mahita fomba hamahana ny olana manokana.
Amin'izany fomba izany dia afaka nitahiry ny toerany amin'ny komandin'ny ady izy.
Rehefa naheno an'io ny mpampanoa lalàna dia tsy afaka ny tsy hiteny afa-tsy amin'ny fanahiana kely izy: “Commander, tsy maintsy voavahan'ny Commander Supreme ihany ve ity raharaha ity? Raha izany dia tena tsy mahasoa antsika izany! ”
Tezitra i Walter nilaza hoe: “Raha tsy manana vahaolana tsara ho an'i Hamid isika dia na tsy tiako ho avy aza izy dia tsy hiraharaha ahy izy!”
Vantany vao vita ny teniny dia niditra haingana ny komandin'ny tafiky ny governemanta ary nilaza avy tao amin'ilay manga hoe: “Chen, Hamid nitaritarika olona iray hitondra hafatra ho ahy, te-hanomboka fifampiresahana fandriam-pahalemana izy!
Sokajy tantara Tags Fandriho ny PDF Millionaire Son-in-Law PDF, mamandrika ny vinantona milioney pdf maimaim-poana, Lehilahy mpitady vady tapitrisa, Zanaka an'arivony tapitrisa, Vola aman-janakalahy manambady PDF, Ilay Zanakalahy Mahagaga, Ilay Zanaka Mahagaga ao amin'ny Lalàna PDF, Ilay vady aman-tapitrisany, Boky vinantonianty tapitrisa, ilay novelon'ilay vinantolahilahy iray tapitrisa, ilay vinantilahy mpila ravinahitra pdf
Mifandraisa anjara amin'ny 25,143 hafa